အခွင့်အရေးရမယ်ဆို ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရချင်ပါတယ် - ဆုမြတ်နိုးကျော် ~ Myanmar Online News
အခွင့်အရေးရမယ်ဆို ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရချင်ပါတယ် - ဆုမြတ်နိုးကျော်
11:35 PM အနုပညာ No comments
Q. လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေက ...
A. Huawei ပွဲအတွက် ဘန်ကောက်ကို ပွဲတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ မြတ်နိုး ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးရှိတာကြောင့် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဂျာနယ်တွေအတွက် Cover တွေရိုက် ဖြစ်ပါတယ်။Q. Red Lip ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေက ...
A. မြ၀တီနှစ်ပတ်လည်အတွက် ရိုက်ကူးရေးရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် သီချင်းအသစ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ Studio ရက်ကိုစောင့်နေ တာပါ။
Q. Red Lip ရဲ့ လေးယောက် မှာ ခေါင်းဆောင်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ...
A. အားလုံးက ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ကိုယ်ရှိတာကြောင့် ကိုယ့်နေ ရာနဲ့ကိုယ်ပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်ရယ်ဆို တာမရှိပါဘူး။
Q. သူစိမ်းလေးယောက်ဖွဲ့စည်း ထားတာကြောင့် အများဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေက ...
A. မိန်းကလေးတွေချည်းပဲဖြစ်တာကြောင့် အစပိုင်းမှာတော့ စကားများတာတွေ ပဋိပက္ခတွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျ တော့ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်တာပျောက်သွားကြ တယ်။ အားလုံးရဲ့သွားချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကလည်း တူနေတော့ နားလည်မှုတွေရှိကြပါတယ်။
Q. တခြား Girl Band တွေ အပေါ် ကိုယ်ထားရှိတဲ့အမြင်က..
A. အဲဒီလိုမသတ်မှတ်ထားပါ ဘူး။ ကိုယ်တွေလည်းကြိုးစားကြရ မယ်။ အရင်ကထက်အချိန်ပိုပေးကြ ရမယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့က Model တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့ အလှအပနဲ့ ဖက်ရှင်ပိုင်းကတော့ ပြောစရာမလို တော့ဘူး။ ဒီနှစ်ထဲမှာ Red Lip အနေနဲ့ အခွေထွက်နိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူများအဖွဲ့ကိုတော့ ဘယ်လိုမှမမြင်တတ်ပါဘူး။
Q. မော်ဒယ်လ်လောကမှာ အသစ်တွေအပြိုင်အဆိုင်ပေါ်နေတော့ ငြီးငွေ့နေပြီလား ...
A. ကိုယ်က၀ါသနာပါလို့လုပ်တာကြောင့် ငြီးငွေ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်၊ Show တွေလျှောက် ရလို့ပျော်ပါတယ်။ အသစ်ပေါ်လာပေမယ့်လည်း မြတ်နိုးတို့က ပရိသတ် သိသင့်သလောက်သိနေပါပြီ။ အ သစ်ဆိုတာ အပြိုင်အဆိုင်တွေပေါ် နေမှာပါပဲ။
Q. ကိုယ်ကမော်ဒယ်လ်အသစ် တွေကြားမှာ စီနီယာဖြစ်နေပြီလား ...
A. အရင် သုံး၊ လေးနှစ်က တော့ အခုထက်ပိုပြီး စီနီယာ၊ ဂျူနီ ယာတွေကို ခွဲခြားပြီးပညာပြချင်ကြတယ်။ အခုချိန်မှာ မော်ဒယ်လ်တွေ အများကြီးပေါ်လာတာကြောင့် ခွဲခြားမှုတော့မရှိတော့ပါဘူး။ ပရိသတ် တွေပေးတဲ့နေရာရှိပြီးသားပါ။
Q. ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်တာက စီးပွားရေးအနေနဲ့လုပ်တာလား ...
A. စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်တာပါ။ ဒီအလုပ်ကလည်း Hair and Beauty ဆိုတော့ လက်ရှိ အလုပ်နဲ့ခွဲထွက်တာမျိုး မရှိပါဘူး။
Q. မော်ဒယ်လ်၊ သီချင်းဆို၊ ဆိုင်ထိုင်အနေနဲ့ပဲ ရပ်တည်သွားမလား ...
A. အခွင့်အရေးရမယ်ဆို သရုပ်ဆောင်လည်း လုပ်ချင်ပါတယ်။ မြတ်နိုးက သင်တန်းလည်းမတတ် ထားတော့ လေ့ကျင့်ရုံပဲရှိပါတယ်။ အခွင့်အရေးရရင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်။
Nang Thiri Maung Model Singer နန်းသီရိမောင် - Isab...
ဒါရိုက်တာ ပရိုဂျူဆာတွေက သဘောကျပေမယ့် ပရိသတ်ကြိုက်ပ...
အခွင့်အရေးရမယ်ဆို ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ မှ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သိ...
“ကျူးက ဥပဒေနဲ့မညီတာကို ဥပဒေနဲ့အညီရှင်းနေတဲ့အတွက်ြေ...
အမျိုးသမီး လမ်းလုပ်သားများဖောက်နေသော လမ်းပေါ်တွင်
နာမည်ကြီး Bollywood မင်းသမီး - Deepika Padukone
New Face Model- ဂျာဆိုင်းအိန်
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး
ကျောင်းသားသပိတ် တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မန္တလေးတွင်...
နာဂနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ နာဂတိုင်းရင...
ရည်းစားဟောင်းရဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်ကို ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ထား...
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း- talvar
“ပြောင်းဖူးတွေနဲ့ ပစ်တာတွေ၊ ခဲနဲ့ပစ်တာတွေ…” – ဇွန်...
ဂီတလောကနဲ့ ခဏဝေးကွာသွားတဲ့ L ဆိုင်းဇီ ဒုတိယတကိုယ်ေ...
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း - The Forest
ဖားကန့်တွင် မြေစာပုံ ထပ်မံပြိုကျ၍ ၃ ဦး သေဆုံးပြန်
မိဘတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်၊ ကျောင်းကိုပို့တာ ကိုယ့်...
၈၄ နှစ်အရွယ် မီဒီယာသူဌေးကြီး ရူးပါ့မားဒေါ့ စေ့စပ်
စကားလုံးတွေကြားက Leonardo နဲ့ Kate Winslet တို့ရဲ ...
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း- Joy
အသက် ၄၆ နှစ်အထိ လှနေတဲ့ ဂျေလိုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
သင့်အရေပြားပျက်စီးစေနိုင်သည့် အကျင့်ဆိုး လေးမျိုး
သရုပ်ဆောင်အဆိုတော် နန်းသီရိမောင်ကို အွန်လိုင်းကနေ ...
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုပေးမယ့် ပရိုဂျူဆာ မိုးဟေကို
ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ sexy ပုံတွေမရိုက်သင့်တော့မှန်း ...
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံး စမ်းသပ်အောင်မြင်ဟု မြောက်ကိုရီးယ...
ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်
ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ တိုက်ခိုက်ခံရ၊ သေဒဏ...
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း- မစ်(စ်)ကောလ်